Dhowr ka tirsan Rakaabkii la socday Diyaarad Air France oo weli la baarayo. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Dhowr ka tirsan Rakaabkii la socday Diyaarad Air France oo weli la baarayo.
Sarkaal ka tirsan Hay’addaha Ammaanka Kenya ayaa u sheegay Wakaalladda Wararka ee AP inay weli su’aalo weydiinayaan 6 ka mid ah Rakaabkii la socday Diyaaradii Air France ee ku degtay Garoonka Mombasa.
Sarkaalkaasi oo aan faasax u haysanin inuu Saxaafadda la hadlo ayaa tilmaamay in rakaabka la baarayo ku jiro Ninkii soo sheegay inuu Bam dhex yaallo mid ka mid ah musqulaha Diyaaradaasi oo nooceedu ahaa Boeing 777.
Ninkaasi waxa uu Duuliyihii Diyaaradda u sheegay inuu musqusha ku soo arkay wax ula muuqday saacad ku dhex jirta sanduuq yar.
Mid ka mid ah Rakaabka oo Saxaafadda kula hadlay GaroonkaMombasa waxa uu sheegay inuusan fahmin waxay sheegayaan, wuxuuna sii raaciyey inuu Adduunkan yahay wax laga argagaxo.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Kenya, Joseph Nkaissery ayaa isagana u sheegay Saxaafadda in tiro yar oo ka mid ah Rakaabka Diyaaradda wax la weydiinayo.
Waxa uu intaasi ku daray inay Dowladaha Kenya, Farancee iyo Mauritius iska kaashanayaan baaritaanka Dhacdadaasi.
Diyaaradda Air France oo ay la socdeen in ka badan 473 Rakaab waxay ku sii jeeday magaalladda Paris, ka hor intaysan si degdeg ah u soo caga-dhiganin Garoonka Moi International Airport ee magaalladda Mombasa.
Diyaaradaasi oo nooceedu yahay Boeing 777 waxay weli taagan tahay Garoonkaasi, iyadoo lagu samaynayo baaritaan dhamaystiran.
Rakaabkii Diyaaradda waxaala dejiyey dhowr Hotel oo ku yaalla Mombasa, waxayna sugayaan Diyaarad kale oo u qaadi doonta magaalladda Paris.
Somali Intelligence Chief accuses Diaspora Youth for Carrying out Majority of Suicide Attacks in Somalia during his address at the SNY Conference in Mogadishu
Kaniisad ku taalla Kenya oo laga helay waxyaabaha qarxa.